Dhaabbanni WFP: Sababa Koronaatiin hojiiwwan gargaarsa Itoophiyatti taasisuuf Doolaara Biiliyoona 2 na barbaachisa jedhe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaabbanni WFP: Sababa Koronaatiin hojiiwwan gargaarsa Itoophiyatti taasisuuf Doolaara Biiliyoona 2 na barbaachisa jedhe.
Dhaabbanni World Food Program (WFP) sababa Koronaatiin hojiiwwan gargaarsa Itoophiyatti taasisuuf Doolaara Biiliyoona 2 na barbaachisa jedhe.
Dhaabbanii sagantaa nyaata addunyaa tatamsa’ina vayirasii koronaa ilalchisuun ibsa baaseen, Itoophiyati godhaa kan ture gargarsa nyatafi kannen biroos ji’oota jahan itti aanuuf kan oolu maallaqa Doolaara Biiliyoona lamaa akka isa barbaachisu ibsee jira.
Ji’a Bitooteessaa qofatti Lammiilee Miliyoona 3f gargaarsa raabsuu isaa kan yaadachiise dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa babal’achuun Koronaa dhiyeessii nyaata dabalataa fi gargaarsa biroos nannoowwan magaalaa fi baadiyyaa geessisuuf baajanni barbaachisu gara dolaara biiliyoona 2 akka ol kaase beeksisee jira. Hanga ammaatti bajata Doolaara miiliyoona 350 ykn %21 kan ga’u ofii isaatiin ramaduu kan beeksise dhaabbatichi, gara nyaataatiin dabalatan gargaarsa kan barbaadan miiliyoonni 10 Itophiya kessa akka jiran tilmaamni kaa’amuu beksisera. Gargaaramtoni kun yoo xiqqaate ji’oota jahan itti aananif kanneen gargaarsi maallaqaan ykn nyaataan godhamu isaan barbaachisuudha jedhera.
Mootummaan Gurraan dhala 30 bara 2012 irraa jalqabee labsii yeroo muddamaa murteessuun sochii namootaa daangeessuu irraan sochii geejjiba ummataa walakkaan akka hir’atu taasiseera. Imaltonni alaa seenanis yeroo turtii guyyoota 14f adda baasanii tursiisuu dirqisiisaa ta’ee fi murteewwan kana fakkaatan raawwatamuu isaanii yaadachuun, gargaarsa duraa kan barbaadan keessaa sababa walitti bu’insa dhunfaan kambile kessatti kan argamanii fi nyaanni dabalataa kan isaan barbaachisu dabalataan sababa vayirasii koronatiin magaalotatti gargaarsa nyaataa kan barbaadan saaxilamtoonni baay’een jiraachuu isaaniitiin dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa gara isaanii ga’uuf gargaarsi dabalataa barbaachisuu ibsa. Sagantaa gargaarsa nyaataa hanga ammaatti jiruun dhaabbatichi gargaarsa dhi’eessaa kan ture naannoolee baadiyyaa qofaaf yeroo ta’u, sababa koronatiin hojiiwwan seeftineetii magaalaatiifis deeggarsi gaafatamaa jira.
Dhaabbani sagantaa nyaata addunyaa dolaara biiliyoonni 2 hojii walii galaaf akka isa barbaachisuu fi dabalataan gargaaramtoonni Miiliyoonni 10 akka jiran haa beeksisu malee, mootummaan baay’ina gargaaramtoota haaraa kan gargaarsa nyaataa barbaadanii hamma miliyoona 15tin ga’ee jira. Walumaa galatti lammileen deeggarsa nyaataa barbaadan miiliyoni 30 ol akka jiratan yoo eegamu, bittaa dhiyeessi nyaataa ji’a 6 fi wantoota biroof hanga ammaatti waahiloota misoomaa irraa doolaara biiliyoona 1.7 gaafatee maallaqni walakkaa ol dhufuu akka jalqabe Koomishiniin Pilaanii fi Misoomaa Riippoortiif ibsuun isaa ni yaadatama.